Xasuusta iyo Cognitive Disorders Xallinta dhibaatooyinka cudurada maskaxda iyo cudurrada maskaxda, gaar ahaan kuwa la xiriira xusuusta iyo garashada.
Xusuusta Xanuunka iyo Cognitive Disorder wuxuu dhiirigeliyaa cilmi-baarista loogu talagalay in lagu turjumo helitaanka shaybaarka ku saabsan maskaxda iyo habdhiska dareenka si loo ogaado cudurka iyo daaweynta si loo hagaajiyo caafimaadka aadanaha. Mashruuc wadajir ah oo u dhaxeeya neurosuusyada aasaasiga ah iyo kuwa kiliinikada ah ayaa la soo dhaweynayaa, sida soo jeedinta ah in ay gacan ka geystaan isku xirka aasaasiga ah ee neuroscience clinical.
Sannad kasta, ilaa afar abaalmarin ayaa la siiyaa. Abaalmarinta waxay bixisaa $ 100,000 sanadkiiba muddo saddex sano ah. Lacagaha waxaa loo isticmaali karaa hawlo kala duwan oo cilmi baaris ah. Looma isticmaali karo mushaharka qaataha.
Waxaan daneyneynaa soo jeedinta ku saabsan xasuusta xasuusta ama garashada xaaladaha caadiga ah iyo xaaladaha wadnaha. Tani waxaa ka mid ah soo jeedinta wax ka qabashada qaababka xasuusta ama garashada ee sinjiga, unugyada, molecular, heerka hiddaha ama habdhaqanka ee xayawaanka, oo ay ku jiraan aadanaha. Waxaan si gaar ah u daneyneynaa soo jeedinta kuwaas oo ku daraya habab cusub oo cusub, iyo sidoo kale kuwa ku lug leh tijaabinta bani-aadamka. Codsiyada wadajirka ah iyo kuwa isku dhafan ayaa lagu dhiirrigeliyaa.
Mashruucyada ay xaddidan tahay sameynta jeebka caadiga ah ee jinsiga cudurada musharaxnimada ee lagu aqoonsanayo daraasaadka ururka, ama si ballaaran u fara badan hidahaas, ayaa la niyad jabay. Intaa ka sokow, mashaariicda lagu samaynayo shaashooyinka isdhexgalka unugyada jirka ee qaababka noolaha (cayayaanka, dixirigooda, duulimaadka, kalluunka, kalluunka) looma tixgelin doono, haddii mashruucan uu ka kooban yahay ujeedooyin gaar ah oo baaritaan ku sameeya cudurada cusub ee laga helo bini-aadanka ama naasaha qaababka nidaamka.